Demografikan'ny mpivarotra enta-madinika | Martech Zone
Demografikan'ny mpivarotra enta-madinika
Sabotsy, Martsa 19, 2016 Sabotsy, Martsa 19, 2016 Douglas Karr
Roa herinandro lasa izay dia nanandrana aho Clicklist, Fiantsenana fivarotana enta-madinika an-tserasera Kroger. Tsy nisy dikany ny rafitra, miaraka amin'ny tombony taonina noho ny fiantsenana fivarotana enta-mavesatra. Voalohany, afaka nijery ny teti-bolako aho tamin'ny nampidirako ny entana tsirairay tao anaty kalesiko. Afaka nahita tsara ny entana rehetra amidy aho. Ny rafitra dia nanara-maso ireo vokatra mahazatra ahy indrindra novidiako. Ary naharitra 10 minitra ny familiana ahy, nasain'ny ekipa Kroger hamindra ny fiarako, ary hijery.
Raha nanana fitarainana voafantina aho dia ny ekipa no nisolo ny pickles an'i Claussen ho Vlasic. Ny vinavinako dia ilay olona nametraka ny entako nivarotra tao amin'ny fizarana pickle fa tsy ilay faritra fampangatsiahana tao amin'ilay fivarotana. Ry zanak'olombelona!
Vidiny kely aloa anefa izany! Tsy mahagaga raha hahatratra ny eGrocery fananganana nomerika roa ao amin'ny 2016:
40% n'ireo mpivarotra enta-madinika an-tserasera 2015 no nilaza fa ny mpivarotra enta-mavesatra voalohany dia tsy manolotra eCom, manondro ny fahaverezan'ny varotra sy ny tsy fivadihan'ireny mpivarotra voalohany ireny.
64% amin'ireo nanandrana niantsena fivarotana enta-madinika amin'ny Internet no hanova ny mpivarotra grocers ho traikefa nomerika lehibe
Ny GenX, ny lehilahy ary ireo manan-janaka no fizarana haingana indrindra amin'ny eGrocery amin'ity taona ity
The Mpivarotra enta-madinika amin'ny Internet 2016 mizara tahirin-kevitra avy amin'ny tatitra vao haingana nataon'i Unata. Mampiharihary ny fironana amin'ny eCommerce ho an'ny 2016 ao anatin'izany ny tatitra: ao anatin'izany ny: ny lehilahy dia liana kokoa amin'ny eGrocery, ny GenX no faritra mitombo haingana indrindra ho an'ny eGrocery ary ny mpanjifa manan-janaka dia voatanisa amin'ny Internet. Lalao mifanentana amin'ny demografika aho!
Tags: clicklistisan'ny mponinaecommercefivarotana varotrampivarotra enta-madinikademografika mpivarotra enta-madinikamiantsenakrogerlisitra tsindry krogertsena krogerfivarotana an-tserasera
Dec 14, 2016 amin'ny 7: 02 AM
Salama, Misaotra nizara bilaogy mahafinaritra toy izany… .Blog tsara indrindra. lahatsoratra tena manampy. Mitombo haingana ny asa fivarotana enta-mandeha an-tserasera eto India. Tiako ny lahatsoratranao satria andro vitsivitsy izao ny tsirairay dia mitady teknolojia farany ary vita mora.